स्वास्थ्य पेज » खाना खाँदा किन राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ? खाना खाँदा किन राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ? – स्वास्थ्य पेज
धेरैजसो मानिसहरु खानेकुरा कसरी खाने ? कति खाने ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् । अझ भनुँ, राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई त त्यति ध्यान नै दिँदैनन् । तर पाचनक्रियाको लागि यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । जब हामी पाचनक्रियाको कुरा गर्छौं, यसको प्रसङ्ग पेटबाट सुरु हुन्छ भनेर बुझ्ने गर्छौं ।
तर वास्तवमा खानेकुरा पेटमा नपुग्दै पाचन क्रिया सुरु भएको मानिन्छ । जब हामी मुखबाट खाना खान सुरु गर्छौं, सँगसँगै पाचन क्रिया सुरु हुन्छ । खाना चपाउन सुरु गर्दा मुखमा र्‍यालसँगै पाचन इन्जाइम निस्केर खाना टुक्राउन सहज गर्ने गर्छ ।